Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Platform Cusub oo Dijital ah oo loogu talagalay Tartanka Miss Universe
ImpactWay, oo ah madal warbaahinta bulshada ah, ayaa ku dhawaaqday iskaashi ay la yeelanayso Ururka Miss Universe Organisation si ay u taageerto tartanka 70-aad ee MISS UNIVERSE, oo si toos ah looga sii daayo aduunka oo dhan Diseembar 12, 2021, saacada 7 pm EST ee Eilat, Israel.
ImpactWayv waa beddelka shabakadaha bulshada ee waaweyn. Waxay u shaqeysaa sidii nooc cusub oo deegaanka dhijitaalka ah, oo diiradda saaraya wanaagga bulshada iyo awood u siinaya isticmaaleyaasha - dadka, ganacsiyada, iyo kuwa aan faa'iido doonka ahayn - inay saameyn ku yeeshaan, ku lug yeeshaan, oo ay wadaagaan saameynta bulshada ee heer caalami.
App-ka ImpactWayv waxa loo dejiyay inuu taageero is dhexgalka saamaynta bulsheed ee aduunka iyo ka qaybgalka bulshada caalamka ee tartamayaasha Miss Universe ee ku dhawaad ​​80 wadan, iyo taageerayaashooda, taageerayaashooda, iyo daawadayaasha aduunka oo dhan, iyagoo gaaraya ku dhawaad ​​nus bilyan daawadayaasha.
Iyada oo qayb ka ah tartanka 70-aad ee MISS UNIVERSE, ImpactWayv waxa ay sidoo kale martigelinaysaa loolan ka dhex jira dhammaan wufuudda si ay u abuuraan "saamaynta" ugu badan ee barnaamijka ImpactWayv ee taageerayaashooda iyo taageerayaashooda. Saamayntu waa mitirka la-hawlgalayaasha bulshada ee cusub ee ImpactWayv, cabbiraadda wacyiga la abuuray iyo falalka dhiirigeliyay hawsha goobta.
Caqabadda ImpactWayv waxay u furan tahay tartame kasta oo si joogto ah u socdaa illaa Diseembar 11, 2021. Ku guulaysta tartanka, sida lagu go'aamiyay tirada ugu badan ee Saamaynta iyo guud ahaan hal-abuurka, waxaa lagu dhawaaqi doonaa inta lagu jiro telefishan toos ah oo heli doona deeq ay ImpactWayv si hay'ad samafal oo ah doorashada tartame.